सुत्नु अघी श्री पाथि`भरा माताको द`र्शन गर्दै भोली भाद्र ८ गते सोमबारको राशिफल पढ्नुहोस ,भेटी स्वरुप एक सेयर गर्नुहोस ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Horoscope/सुत्नु अघी श्री पाथि`भरा माताको द`र्शन गर्दै भोली भाद्र ८ गते सोमबारको राशिफल पढ्नुहोस ,भेटी स्वरुप एक सेयर गर्नुहोस !
वि.सं.२०७७ भदौ ८ गते सोमबार , तदनु`सार ई.सं.२४ अगष्ट २०२०,सूर्योदय-५:४२, सूर्यास्त-१८:३४ आजको राशिफल
मेष –माया प्रेमको बन्धन कसिलो हुँनु`को साथै पति पत्नि बिचको सम्ब`न्धमा थप सुम`धुरता बढेर जानेछ ।लगानि बाट सन्तु्ष्ट लाभ मिल्ने छ। पदोन्न्ति हुने सँकेत रहेको छ। बोलिमा बिशेस साबधानि अपनउनु होला बोलि ले काम बिग्रि`न सक्छ। आ`फन्तको साथ मिल्नेछ।
बृष –आर्थिक लाभ हुने छ। पारिवा`रिक जीवनमा सम`झदारी बढ्ने योग छ। मेलमिलाप हुनेछ। अरुको निर्णयमा नहिड्नु होला। नया काम को सुरुवात गर्दा राम्रो हुनेछ। आकस्मिक लाभको योग छ। मन मा सन्तु`ष्टि रहने छ। आजको उधारो महँ`गो पर्ने छ।
मिथुन- नया काम को सुरु`वात नगर्नु होला। साथीभा`इले धोका दिन सक्छ`न,। अरुको बिस्वा`स नगर्नु होला ,बन्न लागेको काम पनि नबन्न सक्छ। पारिवारिक जीवनमा समझदारी बढ्ने योग छ। आटेको काम पुरा हुनेछ। भे`टघाट हुने योग छ।मन खुसि हुने छ।
कर्कट- नया काम को सुरुवात नगर्नु होला। माया प्रेम र पारि`रिक जीव`नमा खट्पट हुन सक्छ ।बि`वाद सि`र्जना हुने छ। साथी`भाइले धो`का दिन सक्छन । धर्म कर्ममा मन जानेछ ।
सिंह- बोलि ले साथ दिने छ। शारि`रिक र मान सिक मज बुति मिल्ने छ। जस मिल्ने योग छ।पारि`वारिक जीवनमा समझ`दारी बढ्ने योग छ। स`म्मा`नित हुँने योग रहेकोछ । दिन शुभ छ। सोचेको काम पुग्ने छ।
कन्या- प्रिय मान्छे को भेट हुने योग रहेकोछ ।धर्म कर्ममा मन जानेछ ।न या काम को थालनि गर्दा धेरै राम्रो नाफा मिल्ने छ। आटेको काम पुरा हुनेछ। पदोन्न्ति हुने सँकेत रहेको छ। पारि`वारिक जीवनमा समझ`दारी बढ्ने योग छ।
तुला- जस मिल्ने योग छ। मेल`मिलाप हुनेछ। मन मा सन्तुष्टि रहने छ। इज्ज्त बड्ने योग रहेकोछ । पारिवा`क जीवनमा मिठा सपन आउने छ। नया काम को थालनि गर्दा धेरै राम्रो नाफा मिल्ने छ।
बृश्चिक- पारिवारिक जी`वनमा मिठा`सपन आउने छ तर साथी`भाइले धोका दिन सक्छन । बोलिमा बिशेस साब`धानि अपनउनु होला बोलि ले काम बि`ग्रिन सक्छ। नया काम को सुरुवात गर्दा राम्रो हुनेछ। कि`नमेल नगर्नु हो्ला।
धनु- लगानि बाट सन्तु्ष्ट लाभ मिल्ने छ। माया प्रेमको बन्धन कसि`लो हुँनुको साथै पति पत्निबिचको सम्बन्धमा थप सुमधुरता बढेर जानेछ ।लगानि बाट स`न्तु्ष्ट लाभ मिल्ने छ। पदोन्न्ति हुने सँकेत रहेको छ। र`माइलो या`त्राको योग छ।
मकर- सोचेको काम बन्ने छ । नया काम को सुरुवात गर्दा राम्रो हुनेछ। माया प्रेमको बन्धनमा थप सुमधुरता बढेर जानेछ । सम्पति लाभ हुने योग छ। लगानि बाट स` लाभ मिल्ने छ। नबने`को काम पनि बन्न सक्छ । शुभ खबर सुन्ने योग छ।
कुम्भ- भाग्य बढ्ने छ। शारिरिक र मान`सिक मज बुति मिल्ने छ। बोलि ले साथ दिने छ।शारिरिक र मान`सिक मज बुति मिल्ने छ। जस मिल्ने योग छ। पारि`वारिक जीवनमा सम`झदारी बढ्ने योग छ।स`म्मानित हुँने योग रहे`कोछ ।
मीन- शुख मा कमि हुने छ। बोलिमा बिशे`स साब`धानि अप`नउनु होला बोलि ले काम बिग्रिन सक्छ। मन मा स`ष्टि रहने छ। इज्ज्त बड्ने योग रहेकोछ । मौका फु`त्कन सक्छ। चनाखो रहनु हो्ला।